मार्केटिंग ध्यान स्प्यानहरू विस्तार गर्दैछन्, स्राईरहेको छैन! | Martech Zone
मार्केटिंग ध्यान स्प्यानहरू विस्तार गर्दैछन्, स्राईरहेको छैन!
बिहीबार, जुलाई 20, 2006 सोमबार, नोभेम्बर 14, 2016 Douglas Karr
प्रत्यक्ष मार्केटिंग डिपार्टमेन्ट प्रबन्ध गर्दा, म ग्राहकहरूलाई भन्ने गर्थें कि उनीहरूले सम्भावितको ध्यान खिच्ने समय अवधि प्रत्यक्ष मेलबक्सबाट रद्दीटोकरीमा हिंड्न लाग्ने समयसँग सम्बन्धित छ। म अझै पक्का विश्वास गर्छु कि त्यो सत्य छ। मलाई थाहा छैन कि म विश्वास गर्दछु कि उपभोक्ताहरूको ध्यान स्पानहरू वर्षौंदेखि संकुचित भएको छ, किनकि असफल मार्केटरहरूले रोइरहेका छन्, यद्यपि।
मलाई विश्वास छ कि माध्यमको विकासले ग्राहकहरु लाई अधिक ध्यान पुर्‍याएको छ, कममा होइन। जहाँ हामी हेर्दछौं कि त्यस्ता कार्यक्रमहरूको लोकप्रियता एन्जीको सूची, एपिनियन्स, ब्लगिंग, अमेजन समीक्षा, अनलाइन समुदायहरू, आदि। मानिसहरू आफूले मन पराउने उत्पादन र सेवाहरू छलफल गर्न धेरै मेहनत गरिरहेका छन्। त्यस प्रकारको ध्यान सुपरबोलमा -०-सेकेन्ड स्पट हेर्नु भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ। उपभोक्ता फिडब्याकको चारैतिर एउटा फल्ती व्यापार छ।
उपभोक्ताहरूको लागि यी गुनासो फोरमहरूमा यातायातको एक विशाल मात्रा पनि छ। ध्यान को एक नाटकीय उदाहरण एक ब्लग प्रविष्टि हो जहाँ लेखक रेडियो र आफ्नो AOL खाता रद्द गर्न आफ्नो प्रयास पोस्ट। यो सयौं हजार हिट प्राप्त भयो। एओएलले कस्तो प्रकारको पैसा तिर्नुपर्दछ होला कल्पना गर्नुहोस् सकारात्मक ध्यान! यस एकल रेकर्डि onमा कति बढि प्रचारात्मक पैसा हरायो?
अर्को उदाहरणमा, डेभिड बर्लिन्डले आफ्नो १-मिनेटको कलको रेकर्डि posts पोष्ट गर्दछ टी-मोबाइल, जससँग उसले भुक्तानी गर्यो (उसको सामान्य खाता बाहिर) एयरपोर्टमा वायरलेस पहुँचको लागि र जडान गर्न असक्षम भयो। T-Mobile ले आफ्नो भुक्तानी फिर्ता गर्न अस्वीकार गर्‍यो।
नयाँ प्यू रिपोर्टका अनुसार internet प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू वा करिब १२ करोड अमेरिकी वयस्कहरूले ब्लग राख्छन्। इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको Th percent प्रतिशत, वा लगभग million million करोड अमेरिकी वयस्कहरू, ब्लगहरू पढ्छन् - २०० 8 को पतन पछि उल्लेख्य वृद्धि।
यसको कुरा यो हो कि उपभोक्ताहरूको ध्यान स्प्यानहरू विस्तार हुँदैछ, अनुबन्धमा होइन। जे होस्, तिनीहरूको ध्यान सामूहिक माध्यम, क्रेप्टी विज्ञापन, र पीआरबाट फर्कदै छ र समुदाय र शब्द-अफ-अनुहारतिर हेरेको छ।
एक मार्केटरको रूपमा, यो नयाँ टेक्नोलोजीहरू र माध्यमहरू मार्फत उपभोक्ताहरू कसरी संलग्न गर्ने भनेर सिक्न तपाईंको काम हो। यदि तपाईं उनीहरूसँग युद्ध गर्न कोशिस गर्नुहुन्छ भने, तपाईं जित्न सक्नुहुन्न। उपभोक्ताहरूले पहिले भन्दा पहिले बढी ध्यान दिएका छन् उत्तम स्रोतहरूसँग जुन उनीहरूसँग भएको थियो।
टैग: ध्यानएकाग्रता अवधीलम्बाइ
तपाईंलाई कसले भुक्तानी गर्छ?
ज्याक वेल्च गलत छ
जुलाई १,, २०१ at १::26२ अपराह्न
यहाँ अर्को उत्कृष्ट उदाहरण छ, टिकटमास्टरबाट यो एक:
र अर्को बैंक अफ अमेरिकाबाट!